Wararka Maanta: Jimco, Aug 3 , 2012-Col. Caalin oo kasoo horjeestay doorashadii ka dhacday Galmudug (SAWIRRO)
Jimco, August 03, 2012 (HOL) - Madaxweynaha xilka kasii dagaya ee Galmudug Maxamed Axmed Caalin ayaa si kulul u weeraray doorashadii ka dhacday Galmudug ee lagu soo doortay Cabdi Qaybdiid.
isagoo ka qaybgalay xaflad lagu qabtay xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayuu Caalin ku tilmaamay doorashadaas in tahay mid lagu degdegay.
“Isbitaal ayaan ku jiray, xataa way I sugi waayeen inta xaalkaygu dhinac u dhacayo, arrintaas waa mid lagu doonayo in lagu burburiyo jiritaanka Galmudug” ayuu yiri madaxweynaha Galmudug.
Caalin waxaa uu sheegay inuu xilka wareejin doono balse ma cadayn cida uu ku wareejinayo, waxaase uu tilmaamay inuu sii wadi doono xal u raadinta khilaafaadka Galmudug, tan iyo inta uu ka dhimanayo sida uu yiri.
“Waxaa noo yaalla shaqooyin badan, kamana hakan doono xal u raadinta khilaafka Galmudug, tan iyo inta aan ka dhimanayo”.
Waxaa iyaguna halkaa ka hadlay dadweyne kala duwan oo ka tirsan jaaliyada Galmudug ee dalka Kenya, iyagoo sheegay inay garab taaginyihiin Madaxweyne Caalin, intooda bandanna dhaliilay qaabka loo maamulay doorashadii lagu soo doortay Cabdi Qaybdiid.
Waxayna qaar kamid waxgaradkii halkaa ka hadlay ku baaqeen in xal loo raadiyo khilaafaadka jira oo ay ku eedeeyeen dad ay ku sheegeen inay dano gaar ah leeyihiin.
Khilaafaad ka dhex taagan madaxda sare ee Galmudug ayaa xoogaystay maalmihii lasoo dhaafay, kaasoo ku aadan doorashooyinkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, oo maalmo gudahood ay ka dhacday labo doorasho oo lagu soo kala doortay labo madaxweyne.
Waxayna doorashooyinka ka dhacay Galmudug ay ku soo beegmeen xilli uu isbitaal ku yaal magaalada Nairobi ku jiray madaxweyne Caalin oo la sheegay in qalliin looga sameeyay dhanka wadnaha.